Shiinaha 24kV 200A Warshad Soo Celinaysa Feedthru Soosaarayaasha | Anhuang
Anhuang oo ku takhasusay Galinta Gawaarida Gawaarida, waxaan ku siineynaa tayo sare leh oo loo yaqaan 'Rotatable Feedthru Insert'. Alaabtayadu waxay waafaqsan yihiin IEEE386, iyo heerarka IEC.
24kV 200A Gelinta la geliyo ee loo yaqaan 'Rotatable feedthrough insert' waxaa loo isticmaalaa in lagu bixiyo laba duudood oo laga soo qaado hal qalab oo si fiican u duulaya。 Waxay ka dhigeysaa u beddelashada tarbiyeyaasha radial-feed inay quudiyaan kuwa wax beddelaya iyo ku darista ilaaliyaha qadka tooska ah labadaba fudeyd iyo ficil ahaanba. Xuquuqdeeda, dhismeheeda xaddidaadda ratchet waxay ka hortageysaa hawlwadeennada inay si kama 'ah u jabaan bushingka ceelasha inta lagu jiro rakibidda.
Isku xiraha 200A Double-pass kaashka isku xira si loogu xiro fiilada dhulka hoostiisa ah si loogu qeybiyo nidaamka awood qeybinta ee turjubaanka suufka, ku hareereysan sanduuqa laanta korontada, iyadoo la adeegsanaayo tan waxaa weeye: xamuulka jabinta suxulka xarkaha xusulka arrester iyo bushing qalab.
Suxullada Xamuulka Xamuulka ayaa lagu qaabeeyey iyadoo la adeegsanayo qalab tayo sare leh oo baaruudda lagu daaweeyay iyo caag EPDM-ah, marka lagu barbardhigo alaabooyinka la barbardhigo ee la qiimeeyay, gelintu waxay siineysaa isku xir qalab xamuul si buuxda u gaashaaman.
Giraanta tilmaame xiraha isku-xidhka laba-dhaafka ah, oo ku yaal wareegga qoorta duurka, ayaa baabi'ineysa shaqada mala-awaalka ee rakibaadda suxulka jebinta gawaarida ee isku-xidhka duurka. Giraanta jaalaha ah ee dhalaalaysa waxay bixisaa jawaab celin degdeg ah si loo ogaado haddii xusulka si habboon loogu rakibay duurka. haddii giraanta huruuddu ay gebi ahaanba daboosho xusulka jabinta culeyska, si buuxda ayaa loo xiray, haddii giraantu muuqato, xusulka si sax ah ayaa loo rakibi karaa ka hor intaan wax dhibaato ah dhicin.
Sharaxaad Tixraac Maya danab shaqeynaya oo shaqeynaya magac ahaan hadda
200A 24kV feed-th Bushing Insert AH STT-24/200 24kV 200A
Sharaxaad Tixraac No. danab shaqeeya ku shaqeeya magac magac leh
200A 24kV quudin-ku-galinta Bushing AH STT-24/200 24kV 200A
Hore: Si Wanaagsan Udhow
Xiga: 15kV 200A Wareeg Feedthru Gal
15kv 200a Geli Bushing
15kv 200a Wareeg Feedthru Gali
24kv 200a Geli Bushing
24kv 200a Wareeg Feedthru Gali
Ku duugista gelinta
Duubista Iyo Gelinta